कुलमान घिसीङको अर्को चमत्कार : बर्षौंदेखि घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा !
ARCHIVE, SPECIAL » कुलमान घिसीङको अर्को चमत्कार : बर्षौंदेखि घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा !
काठमाडौं- बर्षौदेखि घाटामा गईरहेको विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब ४० करोड नाफा गरेको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गतवर्ष प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट ५० अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । यहि अवधिमा अघिल्लो वर्ष विजुली बिक्रीबाट ३५ अर्ब कमाएको थियो ।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा खर्च बढेपनि नाफा समेत बढेको छ । प्राधिकरण गतवर्ष नाफामा गएपनि अहिलेपनि यसको सन्चिती नोक्सानी ९७ करोड ८९ लाख रहेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो नोक्सानी ८ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो । प्राधिकरणले गतवर्ष भारत र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद वापत २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने विद्युत् खरिद र कर्मचारीको तलबमा ४५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।